को–को बाहिरिदै छन् मन्त्रीबाट ? (नामसहित) | सु-सुचित नेपालको चित्र
को–को बाहिरिदै छन् मन्त्रीबाट ? (नामसहित)
सरकारले करिब एक महिना देखि नै मन्त्री हटाउन लागेको समाचार पत्रपत्रिकामा ब्यापक रुपमा आईरहेको छ । तर, अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डल फेरबदलको सुरसार बालुवाटारबाट भएको छैन । विभिन्न माध्यमबाट चर्चा चलाएर आफू अनुकुलका पात्रहरूलाई मन्त्री बनाउन चलखेल सुरु भएको छ।
शिर्ष नेताहरु मन्त्री बनाईदिन हार गुहार गर्दै प्रधानमन्त्री एबं पार्टि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंग पुग्न थालेका छन् । ओलीले समय आएपछि हुन्छ भन्दै हाँसेर टारे । फेरबदलको हल्ला चल्न थालेपछि जोखिम जोनमा रहेकाहरुको बालुवाटारदेखि प्रचण्ड निवाससम्म दौडधुप चल्यो र अहिले पनि त्यो जारी छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले ढिलो चाँडो आफ्नो टिमलाई रिसाइज र रिभाइज गर्नेछन् ।
यसबारेमा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पटकपटक छलफल पनि भइसकेको छ। बाहालवाला मन्त्रिहरुलाई हटाउँदा बाहिर जाने सन्देश, त्यसले पार्टीको आन्तरिक शक्ति संरचनामा पर्ने असर र सरकारमा पर्ने प्रभावबारे स्पष्ट भएपछि मात्र टिम फेरबदल गर्ने र हतार नगर्ने सहमति भएको छ। ओली अहिले नै टिम फेरबदल गर्ने मुडमा नभएको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नजरमा झण्डै आधा दर्जन मन्त्रीहरु डेन्जर जोनमा परेका छन्। प्रचण्ड र ओली दुबैको नजरमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल डेन्जर जोनमा सबैभन्दा अगाडि छन् । ३३ किलो सुन प्रकरण, निर्मल हत्याकाण्ड, विवादित बढुवा प्रकरणलगायतका कारण उनी दबाबमा छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलगायत मन्त्रीहरुको कामकारबाहीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइसकेको छ। उनीहरु पनि प्रधानमन्त्री ओलीको डेन्जर जोनमा छन्।
वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा अर्थ्विद् डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीका रुपमा सपथ गराउँदा मसिनो स्वरमा विरोध र चौतर्फी आशा पलाएको थियो। भन्सार नाकामा हुने गरेको राजश्व चुहावटलाई पनि उनले राम्रोसँग नियन्त्रण गरेर सुधारको संकेत देखाएका थिए।
जब उनले दुई तिहाइ सरकारको बजेट संसदमा पेस गरे, त्यो दिनदेखि उनको आलोचना राजनीतिक वृत्तमा मात्र चुलिएन, सेयर कारोवारीसम्मले राजीनामा मागे। उनी पनि विवादित बनेका छन् । निजी क्षेत्रले उनलाई खासै रुचाएको अवस्था छैन। व्यापारीहरुले त पटकपटक प्रधानमन्त्रीसमक्ष खतिवडा व्यवहारिक नभएको भन्दै गुनासो गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडा यतिबेला ‘डेन्जर जोन’मा परेका छन्।
तत्कालिन माओवादीबाट धेरै मन्त्री बन्नेमा शक्तिबहादुर बस्नेतको नाम पनि अगाडि नै आउँछ। गृहमन्त्रीसमेत भइसकेका बस्नेत पहिलो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक सल्लाहकार भएका थिए। ओली सरकारमा उनी वन तथा वातावरणमन्त्री छन्।
वातावरण मन्त्री भएलगत्तै तीन महिनाभित्र काठमाडौंको धुलो अन्त्य गर्ने, एक वर्षमा एकहजार बढीलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेका थिए। आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीले समेत टेर्न छोडेको गुनासो प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको छ। राम्रो नतिजा दिन नसकेका मन्त्री बस्नेत पनि डेन्जर जोनमा परेका छन्।
त्यसैगरी कृषि तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणी खनाल पनि सेफ जोनमा नभएको चर्चा चलेको छ। अहिलेसम्म विवादमा नपरेका भलाद्मी र स्वच्छ छविका खनालले पनि खासै नतिजा देखाउन नसकेको चर्चा पार्टी पंक्तिमा हुन थालेको छ।
माईतीघरमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीको निशानामा कुन् कुन् मन्त्री ?